कोरोना संक्रमितलाई बोलाएर भाेज, हप्ता दिनमा आयाेजककाे मृ’त्यु् — Sanchar Kendra
१आज ९३०५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १६८ को मृत्यु
२कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न भकाभक किन पछि हट्दैछन काठमाडाैं उपत्यकाका ठुला अस्पताल ? यस्तो छ कारण
३फेरि गयो ५.८ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्पको धक्का, कहाँ हो केन्द्रबिन्दु ?
४कोरोनालाई जित्नुभयो ? अब अनिवार्य ध्यानमा राख्नुहोस् यी कुरा र भुलेर पनि कहिले नगर्नुहोस यी गल्ति
५घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
६नयाँ सरकार गठनका लागि बाबुराम भट्टराईले राखे यस्तो प्रस्ताव
७नेपालका अस्पतालमा सकियो अक्सिजन, शय्यामा छट्पटाउँदै बिरामी
८नर्सको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रपतिले गरिन् यस्तो ट्वीट, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
९आमाको मुख हेर्ने दिनमा सासुआमा सिता दाहालको फोटो राख्दै बिना मगरले किन लेखिन यस्तो स्टाटस, यस्तो छ कारण
१०अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा जेठ १७ गतेसम्म प्रतिबन्ध
११खोपमा पनि भ्रष्टाचार भएको समाचार बाहिरिएपछि स्वास्थ्यमन्त्रीले मुख खोले
१२नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा नयाँ रेकर्ड, आज एकैदिन २२५ जनाको मृत्यु
Corona Update अन्तराष्ट्रिय
कोरोना संक्रमितलाई बोलाएर भाेज, हप्ता दिनमा आयाेजककाे मृ’त्यु्
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई सामान्य रुपमा लिँदा एक जना व्यक्तिको ज्यान गएको छ । नर्वेका एक व्यक्तिले आफ्नो घरमा संक्रमितहरुको भोज लगाउँदा उनी स्वयम्को ज्यान गएको हो ।
नर्वेको हंस क्रिस्चियन गार्डर नामका व्यक्ति कोरोना भाइरसको बारेमा भ्रमपूर्ण खबरका लागि चर्चामा थिए । कोरोना भएको दाबी गर्दै केही दिन पहिले उनले कोरोना संक्रमितलाई डाकेर भोज लगाएका थिए । यही कारण कतिपय व्यक्तिहरुमा कोरोना संक्रमण भयो ।
प्रहरीले उक्त भोजको बारेमा जानकारी पाउने बित्तिकै एक विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो विज्ञप्तिमा कति मानिसहरु उक्त समारोहमा भाग लिए भन्ने आफूहरुलाई थाहा नभएको र सहभागी सबैले कोरोनो परीक्षण गर्न भनेको थियो ।
ती व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमार्फत कोरोना महामारी सम्बन्धी गलत सूचना फैलाएका थिए । उनले २८ र २९ मार्चमा उक्त समारोह आयोजना गरेका थिए भने उनको ६ अप्रिलमा मृ’त्यु भएको थियो ।
यस्तै भारतमा कोरोनाभाइरसबाट अहिलेसम्म कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक करोड ५० लाख नाघेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले सोमबार जनाएको छ ।
सो मन्त्रालयले सोमबार दिएको जानकारी अनुसार कोरोना शुरु भएयता भारतमा हालसम्म १ करोड ५० लाख ६१ हजार ९१९ जना कोरोना सङ्क्रमित भएका छन् ।
भारतमा अहिले पनि सङ्क्रमित अवस्थामै रहेकाहरुको सङ्ख्या भने १९ लाख २९ हजार पुगेको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा एक लाख २८ हजार १३ जना कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमणमुक्त भएको विवरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
योसँगै अहिलेसम्म सङ्क्रमणमुक्त भएकाहरुको कुल सङ्ख्या एक करोड २९ लाख ५३ हजार ८२१ पुगेको छ । भारतमा गत जनवरी १६ बाट कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप अभियान शुरु भएको थियो सो समयबाट अहिलेसम्म भारतमा १२ करोड ३८ भन्दा लाख व्यक्तिले खोप लगाएका छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारी फैलिने क्रम एकातिर चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप चलाउने क्रम पनि चलिनै रहेको छ । भारतमा अहिले कोभिसिल्ड, कोभ्याक्सीन र स्पुट्नीक भी गरी तीन प्रकारका खोपको प्रयोग भइरहेको सरकारी निकायहरुले जनाएका छन् ।
रुसले विकास गरेको स्पुट्नीक भी भने यही अप्रिल १२ देखि मात्रै लगाउन थालिएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । भारतमा आइतबार मात्रै १३ लाख ५६ हजार १३३ जनाको कोरोना परिक्षण गरिएको भारतीय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले जनाएको छ । अप्रिल १९ सम्म कूल २६ करोड ७८ लाख भन्दा बढीले कोरोना परीक्षण गरिएको पनि परिषदले उल्लेख गरेको छ ।
भारतको राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली सवभन्दा धेरै कोरोना प्रभावित राज्यको रुपमा रहेको छ । दिल्लीमा आइतबार एकै दिनमा २५ हजार ५०० जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका १६१ जनाको मृ’त्यु भएको छ ।
डब्ल्यूएचओको यस्तो नया डरलाग्दो चेतावनीले विश्वभर त्रा’स
आज ९२७१ जनामा कोरोना पुष्टि, मृत्यु हुनेमा अहिलेसम्मकै रेकर्ड ब्रेक
कहाँ खस्यो चीनको अनियन्त्रित रकेट ?
कोरोना कहरका बेला राजधानी काबुलमा शक्तिशाली वि’स्फोट, यस्तो छ क्षतिको विवरण
काठमाडौं महानगर भित्र ४२ हजार कोरोना संक्रमित, कुन वडामा कति ? विवरणसहित
आज ८४१८ जनामा कोरोना संक्रमण, ५३ को मृत्यु